ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၇) မူလမြဘုရားနှင့် ကိုးထပ်ဘုံကျောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၇) မူလမြဘုရားနှင့် ကိုးထပ်ဘုံကျောင်း
ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၇) မူလမြဘုရားနှင့် ကိုးထပ်ဘုံကျောင်း
Posted by weiwei on Jul 15, 2014 in Photography, Travel | 17 comments
ဘုရားဖြူကနေ မူလမြဘုရားကို ဆက်သွားကြပါတယ်။ ဆင်တူ အံဇာတုံးကား (၈) စီး တန်းစီပြီး သွားကြပါတယ်။ ကားသမားတွေရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုတစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရသေးတယ်။ လမ်းကွေ့တစ်ခုရောက်တိုင်း ကားတစ်စီးက ၀င်ရပ်ပြီး ကြားထဲကို တခြားကားတွေဖြတ်မ၀င်အောင်ကာထားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အဲဒီကားက နောက်ဆုံးကနေ ပြန်လိုက်တယ်။ အရမ်းရှင်းနေတဲ့ လမ်းတွေမှာတောင်မှ စည်းကမ်းတကျမောင်းနေတာက ကျွန်မတို့ရန်ကုန်သူားတွေအတွက် အံ့သြစရာဖြစ်နေခဲ့တယ်။ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး တစ်ချိန်လုံးဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောနေကြတာလဲ သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။
အချိန်မရလို့ မြဘုရားမှာ ၁၅ မိနစ်လောက်နဲ့ အမြန်ဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ မြဘုရားလို့ နံမည်ခေါ်ပေမယ့် တကယ်တော့ ကျောက်စိမ်းဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်က မြဘုရားထက် အရင်စောပြီး ပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်လို့ မူလမြဘုရားလို့ ခွဲခြားပြီး နံမည်ခေါ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းတစ်ခုလိုမျိုးထဲမှာ ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ထားရှိပါတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကတော့ ပုံတွေမှာပဲ ကြည့်လိုက်ပါအုန်း ..
ပုံ (၁) ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းခြင်း မြင်ကွင်း
ပုံ (၂) စည်တော်ကြီးတစ်ခု
ပုံ (၃) နတ်ကွန်းတစ်ခု
ပုံ (၄) မြဘုရားကိန်းဝပ်ရာ ကျောင်းဆောင်
ပုံ (၅) မြဘုရား
ပုံ (၆) နောက်ထပ် ကျောင်းဆောင်တစ်ခု
ပုံ (၇) ဘုရားဘွဲ့တော် ဘယ်လိုခေါ်သလဲတော့မသိဘူး ..
ပုံ (၈) အနီးကပ် ဖူးကြရအောင်
ပုံ (၉) နတ်ကွန်းထဲမှာ ကိုးကွယ်ထားကြတဲ့ မြန်မာဘုရင်တစ်ပါး
မူလမြဘုရားကနေပြီး ကိုးထပ်ဘုံကျောင်းကို ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်နာရီလောက် ကားစီးပြီးတဲ့အခါ တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့ ဘုံကျောင်းနဲ့ တည်ဆောက်လက်စ ကွမ်ရင်မယ်တောင်ရုပ်ထုကြီးကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ ယိုးဒယားစပ်ထားတဲ့ ဗိသုကာလက်ရာများဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့အတွက်တော့ ဆန်းနေပါတယ်။
ဘုံကျောင်းမှာ သတ်သတ်လွတ် စတုဒီသာထမင်း နေ့စဉ်ကျွေးပါတယ်။
ပုံ (၁၀) ကားရပ်ထားရာနေရာမှ
ပုံ (၁၁) ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာ
ပုံ (၁၂) တစ်ပါတ်ပါတ်ကြည့်တဲ့အခါ ခေါင်းလောင်းလေးတွေ တီးသွားကြတယ်
ပုံ (၁၃) ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ မ၀နိုင်အောင် လှနေတယ်
ပုံ (၁၄) ဘာအဓိပါယ်လဲမသိ
ပုံ (၁၅) လှေကားကနေ ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါ
ပုံ (၁၅) ဘုံပထမဆင့် အလယ်တည့်တည့်မှာ
ပုံ (၁၆) ယိုးဒယားဘုန်းကြီး
ပုံ (၁၇) ဒုတိယထပ် ဘုံအဆင့်မှာလဲ ရုပ်ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်
ပုံ (၁၈) ဘုံ တတိယဆင့်
ပုံ (၁၉) တည်ဆောက်လက်စ
ပုံ (၂၀) ထမင်းစားဆောင်ထဲမှ မယ်တော်ပုံ
အပြန်မှာ ညနေစောင်းဖြစ်နေပြီမို့လို့ မယ်ဆိုင်က ဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီး နားလိုက်ကြပါတယ် …
နောက်တစ်ပိုင်းဆိုရင် လက်စသတ်နိုင်တော့မှာပါ ..
မူလ မြဘုရားရှိတာ အခုမှသိတာ။
ပုံ၁၉ က ဘုရားကြီး ကို မြင်တော့ ပြည်မြို့က ဆယ်ထပ်ကြီးဘုရားကို သတိရလိုက်တယ်။
ဘုရား အတွက် အမိုးအကာ ကျောင်းဆောက်လို့ မရဘူးဆိုလား။
ဆောက်ရင် အကြောင်းကြောင်း နဲ့ ပျက်သတဲ့။
ဘယ်သူ အတိအကျ သိနိုင်လဲ မသိ။
မူလ မြဘုရားရှိမှန်း ခုမှ သိတယ် ဝေရဲ့။
မြန်မာ ဘုရင်က ဘူလဲ?
နံမည်မေ့တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် ဘုရင့်နောင်နဲ့ အလောင်းမင်းတရား မသေချာဖြစ်နေလို့ ဒီအတိုင်းပဲ ရေးလိုက်တာ ..
တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ ၀င်ဖြေပေးမှာပဲလို့ သိနေလို့လေ ..
ဦးဘလက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
ဘုရင့်နောင် မင်းတရားကြီးကို ဘုရားတွေမှာ နေရာတိုင်း နတ်ကွန်းလိုလုပ်ပြီး ကိုးကွယ်ထားကြတာ တွေ့ခဲ့ရတယ် ..
ဘုရင့်နောင်ကိုပဲ ယိုးဒယားတွေ ချစ်ခဲ့ကြတယ်လို့
အခုထိကို ပု ရင် နောင် ပုံဆိုပြီး အိမ်တွေမှာ
ဈေးသည်တွေ ဆိုင်ခန်းတွေလဲ မတွေ့ဘူးနော်..
ဘာဈေးသည်မှ မရှိဘူး …
ဘုံကျောင်းအတွင်းထဲမှာတော့ အဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ် … ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ ..
တစ်ခု သတိရလို့ ပြောရအုန်းမယ် ..
ပုံထဲမှာပါတဲ့ ယိုးဒယားဘုန်းကြီးက နံမည်ကြီးဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် … သူ့ရှေ့က စားပွဲပေါ်မှာ ပုတီးတွေကို လင်ဗန်းကြီးတစ်ခုနဲ့ထည့်ထားတယ် .. ဆရာတော့်ကို လာဖူးတဲ့အခါ ဆုပေးပြီး ပုတီးတစ်ခု ပေးတာတွေ့ရတယ် .. အဲဒါ ကျွန်မတို့ မြန်မာအဖွဲ့လဲရောက်သွားရော .. ဘုန်းကြီးကိုလဲ မရှိခိုးပဲနဲ့ ပုတီးတွေကို အတင်းဝင်လုကြတာ ၀က်ဝက်ကွဲပဲ (ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအလွန်ပဲ) တစ်ယောက်ကို တစ်ခု နှိုက်ယူတာတောင်မဟုတ်ဘူးနော် … တစ်ခါနှိုက်လိုက်ရင် ၄ – ၅ ခုလောက်ကို ပါအောင် နှိုက်ကြတာ .. အိမ်မှာကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ရော … မိတ်ဆွေတွေလက်ဆောင်ပေးဖို့ပါပါတယ် ..
ကျွန်မက ဒီအတိုင်းရပ်ကြည့်နေပြီးမှ ရှက်လို့ အပေါ်တက်နေလိုက်တော့တယ် …
ကျော့်နံမယ် ပါဒယ်ဆိုလို့ လာကျိလိုက်တာ
အော် .. ကားနံမယ်ဒွေ ဖစ်နေဒါဂိုး ….
လဂါး နောက်တာ ….
ကျော်လည်း မြဘုရားကို ဖူးချင်နေတာ …
ခုတော့ ဖူးရပြီပေါ့ … သန်းကျူး …
ပုံ ၁၄ က အလုံးကြီးတွေက ဒီလိုဗျ …
အဲ့ဒါ မ,နိုင်တဲ့လူက ဘယ်လောက် ရလိမ့်မယ် ဆိုပြီး အောက်မှာ စာကပ်ထားတယ်လေ
မြဘုရားကို ဇွန်းလဲ မဆွဲပေးထားဘူးကွယ်…
မဝေကလမ်းခုလတ်မှာထားတွားလို့လာပြန်မှခေါ်ပါ့မလားလို့ မူလမြဘုရားရှိတာတော့ကြားဖူးတယ်။ အကိုက လာအိုမှာနေတာမို့။ ပြည်ဘုရားကတော့ ဘယ်လိုမှမိုးမရဘူးပြောတာပဲ။ အတိအကျတော့သေချာမသိဘူးအရီးရေ။ မိုးတိုင်းပြိုတာပဲတဲ့။ ခုခေတ်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာနဲ့ဆိုမိုးလို့များရနိုင်မလားမသိဘူး။ပုံ ၁၄ ကအလုံးတွေက ဒီကဘုရားတွေကလ်ု အဓိတ်ဌာန်ကျောက်တုံးတွေလား မဝေရေ
ချင်းရိုင်က ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်လည်း ဘန်ကောက်က မြဘုရားလို Wat Phra Kaew (วัดพระแก้ว, Temple of the Emerald Buddha) ပါပဲ ။ ဘုရားတည်တဲ့ သမိုင်းကြောင်း အတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိပေမယ့် ၊ ဘန်ကောက် နန်းတော်ရာထဲက မြဘုရားကို ၊ ၁၅ရာစုနှစ် အစောပိုင်းလောက်မှာ အခုဘုရားဝင်းထဲက စေတီတစ်ဆူ (မဝေ ပုံထဲမှာ မပါ) ကို မိုးကြိုးပစ်လို့ ဋ္ဌာပနာတိုက် ပွင့်သွားရကနေတွေ့တာပါ ။ နောင်တော့ စစ်နိုင်တဲ့ ဘုရင်တွေနောက် နယ်ပယ်စုံ ဒေသစာရီကြွလိုက်တာ ၁၈ရာစုလောက်မှ ဘန်ကောက်ကို ရောက်ပါတယ် ။
ပုံ (၅) က မြဘုရား (ကျောက်စိမ်း) ကတော့ ၁၉၉၁မှာ တရုတ်သူဋ္ဌေးကြီး တစ်ယောက်က လှုထားတာ ခင်ဗျ … Carved in Beijing ။ ပုံ (၇) နဲ့ ပုံ (၈) က ဆင်းတုကတော့ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ပါပြီ ။ အရင် အဲသည့်ဘုရားကျောင်းက မဟုတ်ပါဘူး ၊ ၁၉၆၁ လောက်ကမှ အဲသည့်ကို ရွှေ့ထားတာပါ ။ မဝေ ကျန်ခဲ့သေးတာက အဲသည့်ကျောင်းမှာ အင်ကြင်းပင်တွေနဲ့ အလွန်လှတဲ့ ဝါးရုံတောကြီးရှိသေးတယ် ၊ နောက်ပြီး မြန်မာ အက္ခရာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် Lanna စာနဲ့ ကဗျည်းထိုးထားတာတွေလေ … အဟိ
ကျောက်စ်… ဓာတ်ပုံတွေ လက်ပကျွတ်ပျက်တုန်းက ပါသွားလို့ပေါ့… ဟွင်း ဟွင်း
ကျွန်မက ဘာမှ ရေရေရာရာသိတာမဟုတ်လို့ .. အင်တာနက်ထဲ ကြည့်ရမှာလဲပျင်းသေး .. ကျွန်မတို့အဖွဲ့က ဂိုက်လဲမပါဘူးလေ .. အဲဒီမှာ 15 မိနစ်ပဲ အချိန်ရလိုက်လို့ အမြန်ဆင်းပြီး အမြန်ပြန်တက်ခဲ့ရတာ …
အင်ကြင်းပင်နဲ့ ၀ါးရုံတောပုံတွေကို ပုံများမှာစိုးလို့ ဖယ်လိုက်တာပါ ..
မေ၇ာက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာတွေမို့ မဝေရဲ့ပုံတွေပဲအသေအချာကြည့်သွားပါတယ်
အံစာတုံး စီးသွားတယ်ဆိုလို့ ရီမိသေးတယ်…
ဓာတ်ပုံခရီးစဉ်က တစ်ကယ်ကိုသွားကြည့်ချင်လောက်အောင် စွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်…
ဒီလို လှပသန့်ရှင်းတဲ့ အများပိုင်နေရာမျိုးတွေ မြန်မာမှာလဲ ရှိလာစေချင်လိုက်တာနော်…
ဒီမှာဆို လမ်းလျှောက်မရအောင် ဈေးသည်တွေ ၀ိုင်းလာပြီး သူ့ဝယ်ပါ ငါ့ဝယ်ပါနဲ့ ကြွက်ကြွက်ညံနေမှာမြင်သေး ဝေရေ….
မအိတို့လို ခရီးသွားဝါသနာပါတဲ့သူတွေ သွားသင့်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ ..
မြန်မာပြည်တွင်း ဘုရားဖူးခရီးစဉ်တွေနဲ့ ခံစားချက်ခြင်း မတူဘူးလေ .. ဗဟုသုတရတာပေါ့ ..
ဈေးလဲ မကြီးဘူး ..
ဒီပို့စ်လည်း ကြည့်ပြီး မန့်ပြီး ခင်ဗျ။